Asomafo no Gyee Nea Ɔyɛ Wɔn Mu Kɛse Ho Akyinnye | Yesu Asetena
YESU TENEE WƆN ADWENE WƆ MPANINIE HO
YESU HYƐƐ NKƆM SƐ PETRO BƐPA NO
ƆDƆ NA ƐMA YƐHU YESU AKYIDIFO
Bere a Yesu ne asomafo no kɔdii Twam anadwo no, ɔhohoroo wɔn nan ho de kyerɛɛ wɔn ahobrɛase. Adɛn nti na ɔyɛɛ saa? Asomafo no, na wɔdɔ Onyankopɔn paa, nanso na mpaninie reyɛ adi wɔn ti; nea ɔbɛyɛ wɔn mu kɛse na na ɛhia wɔn. (Marko 9:33, 34; 10:35-37) Anadwo a wɔhyiaa mu no koraa, saa subammɔne no san yii ne ti.
“Akasakasa gyegyeegye bi . . . sɔree [asomafo no] ntam wɔ wɔn mu deɛ ɔyɛ kɛseɛ ho.” (Luka 22:24) Bere a Yesu huu sɛ wɔregye asɛnkoro no ara ho akyinnye no, ɛbɛyɛ sɛ ne werɛ hoe paa! Dɛn na ɔyɛɛ wɔ asɛm no ho?
Nea asomafo no yɛe no, Yesu antwiw wɔn anim. Mmom ɔnyaa wɔn ho abotare ne wɔn kasaa sɛ: “Amanaman no ahemfo di wɔn so bakoma, na wɔfrɛ wɔn a wɔdi wɔn so tumi no Adɛɛfoɔ. Na mo deɛ, ɛnsɛ sɛ moyɛ saa. . . . Na hwan na ɔyɛ ɔkɛseɛ, deɛ ɔte didipono ho anaa deɛ ɔresom?” Ná Yesu pɛ sɛ wɔkae ahobrɛase ho nhwɛso a ɔyɛ maa wɔn no, enti ɔkaa sɛ: “Me deɛ mewɔ mo mu sɛ deɛ ɔresom.”—Luka 22:25-27.
Ná bɔne wɔ asomafo no ho, nanso bere a Yesu reyɛ ne som adwuma no nyinaa mu, na ɔne wɔn ara. Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Me ne mo reyɛ ahennie ho apam, sɛdeɛ m’Agya ne me ayɛ apam no.” (Luka 22:29) Ná saa mmarima no taa Yesu akyi denneennen. Enti ɔmaa wɔhuu sɛ apam a ɔne wɔn ayɛ no bɛma wɔakɔka ne ho ne no adi ade wɔ n’Ahenni mu.
Ná asomafo no wɔ akwannya a ɛso bi ni, nanso na wɔda so yɛ nnipa a bɔne wɔ wɔn ho. Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Satan pɛ sɛ ɔnya kwan hu mo so sɛ ayuo.” Nea enti a ɔkaa saa ne sɛ, ayuo deɛ sɛ wohu so a, ɛtu pete. (Luka 22:31) Ɔsan ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Deɛ ɛbɛba me so no bɛto mo nyinaa suntidua anadwo yi, na wɔatwerɛ sɛ, ‘Mɛbɔ odwanhwɛfoɔ no na nnwankuo no mu nnwan abɔ ahwete.’”—Mateo 26:31; Sakaria 13:7.
Petro de ahotoso ka kyerɛɛ Yesu sɛ: “Sɛ deɛ ɛbɛba wo soɔ no bɛto wɔn nyinaa suntidua mpo a, me deɛ, ɛrento me suntidua da!” (Mateo 26:33) Yesu ka kyerɛɛ Petro sɛ ansa na akokɔ bɛbɔn mprenu saa anadwo no, na Petro apa no sɛ ɔnnim no. Nanso Yesu de toaa so sɛ: “Masrɛ ama mo na mo gyidie ansa; na wo, sɛ wosan ba a, hyɛ wo nuanom den.” (Luka 22:32) N’ano ansi mpo na Petro yii ano sɛ: “Sɛ ɛtwa sɛ me ne wo wuo mpo a, merempa wo da.” (Mateo 26:35) Asomafo a aka no nyinaa nso kaa saa ara.
Yesu ka kyerɛɛ asomafo no sɛ: “Me ne mo bɛtena berɛ tiaa bi. Mobɛhwehwɛ me; na sɛdeɛ meka kyerɛɛ Yudafoɔ no sɛ, ‘Baabi a merekɔ no montumi mma hɔ’ no, saa ara na seesei meka kyerɛ mo nso. Mede ahyɛdeɛ foforɔ rema mo, sɛ monnodɔ mo ho; sɛdeɛ medɔ mo no, mo nso monnodɔ mo ho saa ara. Sɛ mododɔ mo ho a, ɛno na ɛbɛma nnipa nyinaa ahunu sɛ moyɛ m’asuafoɔ ampa.”—Yohane 13:33-35.
Bere a Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ ɔne wɔn bɛtena bere tiaa bi no, Petro bisaa sɛ: “Awurade, ɛhe na worekorɔ?” Yesu buaa no sɛ: “Baabi a merekɔ no wontumi nni m’akyi seesei, nanso akyire yi wobɛdi akyire aba.” Asɛm no yɛɛ Petro nwonwa maa ɔkaa sɛ: “Awurade, adɛn nti na mentumi nni w’akyi seesei? Mede me kra bɛto hɔ ama wo.”—Yohane 13:36, 37.
Afei Yesu kɔfaa biribi a na asi atwam bae. Bere bi a ɔmaa asomafo no kɔkaa asɛm no wɔ Galilea no, ɔkaa sɛ mma wɔmmfa akwantu anaa aduane bɔtɔ. (Mateo 10:5, 9, 10) Bere a Yesu kaee wɔn saa asɛm no, ɔbisaa wɔn sɛ: “Biribi hiaa mo anaa?” Asomafo no nso buaa sɛ: “Dabi!” Ɛnde dɛn na na afei wɔbɛyɛ? Yesu kyerɛɛ nea wɔnyɛ. Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Momma deɛ ɔwɔ sika kotokuo no mfa, na deɛ ɔwɔ akwantuo bɔtɔ no nso saa ara; na ma deɛ ɔnni nkrantɛ no ntɔn n’atadeɛ ngugusoɔ na ɔntɔ bi. Na meka kyerɛ mo sɛ, ɛtwa sɛ deɛ wɔatwerɛ yi ba mu wɔ me so sɛ, ‘Wɔkan no fraa mmaratofoɔ.’ Na deɛ ɛfa me ho no renya mmamu.”—Luka 22:35-37.
Ná ɛrenkyɛ na wɔabɔ Yesu asɛndua mu aka abɔnefo ho. Nea ɛbɛsi saa bere no na na Yesu reka ho asɛm. Ɛfiri saa bere no, na nkurɔfo bɛtan n’akyidifo no ani paa. Ná ɛyɛ asomafo no sɛ wɔaboa wɔn ho, enti wɔkaa sɛ: “Awurade, hwɛ! nkrantɛ mmienu nie.” Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Ɛyɛ.” (Luka 22:38) Esiane sɛ na wɔkura nkrantɛ mmienu nti, akyiri yi Yesu de yɛɛ adesuade kyerɛɛ wɔn biribi foforo.
Dɛn na ɛkɔfaa akyinnyegye baa asomafo no ntam? Dɛn na Yesu ka de tenee wɔn adwene?
Apam bɛn na Yesu ne n’asuafo anokwafo no yɛe?
Ná Petro gye ne ho di paa. Nanso dɛn na Yesu ka kyerɛɛ no?